के देउवाले नै काँग्रेस डुबाएका हुन त ? — Himali Sanchar
नेपालको राजनितिको आरोह अबरोहमा नेपालकै नम्बर १ कहलिएको पुरानो पार्टी काँग्रेसले २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा भोगेको कहाली लाग्दो पराजयले काँग्रेसका नेता देखि कार्यकर्तालाई समेत निन्द्रामा झस्काउने गर्दछ। यो नमिठो कहाली लाग्दो हार हुँदा काँग्रेसका अधिकाँश नेता कार्यकर्ताले पार्टी सभापति देउवाले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भनेर भन्दै आएका छन भने सभापति देउवा आफूले मात्र यो हारलाई नैतिक जिम्मेवारी लिने पक्षमा छैनन्। यसै कारणलाई मुख्य कारक तत्व बनाएर काँग्रेसका बरीष्ठ नेताहरू बीच एक आपसमा पानी बाराबारको स्थितिमा समेत पुगेको छ। यस्तो अबस्था काँग्रेस भित्र हुनु एकदमै दुर्भाग्य पूर्ण कुरा हो।
२०७४ को पराजय संगसंगै काँग्रेस भित्र गुटको सल्बलाहट एकदमै तातिएर गएको छ। पार्टी भित्र थुप्रै धारहरू सृजित भएका छन। काँग्रेस भित्र देउवा, पौडेल, कोईराला, सिटौला र सिंह गुटले झनै मौलाउने मौका पाएको छ। काँग्रेस भित्रको आन्तरीक कलह भुसमा आगो सल्किए झै सल्किएको छ यसलाई सानो तिनो पानीको फोहराले निभाउन सक्ने अबस्था छैन।काँग्रेसकै निति बिधानमा रहेर कसैले पनि काम गर्न सकेको छैन। जसलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही अनरूप पार्टी चलाउने प्रयास गर्दै छन। पार्टी भित्र ब्यथिति कुसंस्कारको दबदबा कायम हुँदै छ। मर्यादा क्रमको कसैलाई ख्याल छैन। नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भएको काँग्रेसलाई यो स्थितिमा पुराउने देउवा मात्र नभएर सबै नेताहरू हुन र यिनीहरू सबैले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दछ।
काँग्रेस भित्र देउवालाई निरङ्कुशबादी र घमण्डी नेता भनेर चिन्ने चिनाउने प्रयास भई रहदा केही दिन अगाडी अर्थात तिहारको लक्ष्मी पुजाको दिन बिहान ९:३० बजे नेपाली जनसम्पर्क समिति मकाउका सभापति लेख बहादुर गुरूङ, महामन्त्री म आफै, सह महामन्त्री गणेश गुरूङ र सदस्य नवराज पराजुलीले एक बिशेष भेटघाट सभापति देउवासंग गरेका थियौ।हाम्रो साथमा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशी साथै गंगाधर पराजुली पनि हुनु हुन्थ्यो। भेटघाटमा जनसम्पर्क समिति मकाउको तर्फबाट मैले सभापति देउवालाई काँग्रेसको बिगत, बर्तमान अबस्था, पार्टीले भबिष्यमा खेल्नु पर्ने भावी रणनितिहरू र बिशेषत काँग्रेस भित्रको गुटबन्दी र नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूका बर्तमान अबस्थाका बारेमा कुरा उठान गर्दै सुनाउने मौका पाएको थिए। ३० मिनेट भन्दा लामो भेटघाटमा सभापति देउवाले एकदमै गम्भीरता पूर्वक सुन्दै र त्यसको जवाफ दिदै जानु भयो। काँग्रेस भित्र मेलमिलापको खाँचो एकदमै रहेको र गुटका कारण बोलिचाली समेत बन्द भएको कुरा बताउनु भयो।
मैले सोचेको थिए देउवाले हाम्रो कुरालाई त्यति चासो दिनु हुँदैन होला भन्ने तर परीणाम त्यस्तो रहेन। शालीन मुद्रामा हाम्रो कुरा सुन्नु भयो। पार्टी भित्रका कमी कमजोरी र काँग्रेस हार्नुको कारण हामीलाई बाड्नु भयो। जसरी मान्छेहरू देउवालाई अबुझ घमण्डी भन्ने संज्ञा दिन्थे तर मैले उहाँमा त्यस्तो केही पाईन। हो देउवाबाट कमी कमजोरी नभएका भने पक्कै होईन राजदुत प्रकरण, आईजीपी प्रकरण र शुशिला कार्की प्रकरण उहाँकै कारणले उब्जिएको हो। उहाँलाई सल्लाह दिने आसेपासेहरूको पनि त्यति नै ठूलो भूमिका रहेको छ। यी प्रकरणहरूले काँग्रेसलाई घाटा त पुरायो नै त्यस माथि पनि ७४ को चुनावमा बाम गठबन्धन नै प्रमुख कारक तत्व बन्यो चुनाव हार्नुमा।
सबैले देउवाले नै हारको जिम्मेवारी लिनु पर्छ भनी रहदा पौडेल, कोईराला, सिटौला, महत, केसी, थापा र सिंहहरूले चाँहि लिन नपर्ने हो र ? केन्द्रिय कमिटीकाले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन तसर्थ काँग्रेसका नेता हो सबै भन्दा पहिला आफुले आफैलाई चिन्ने प्रयास गरौ म को हुँ भनेर आफ्नो धरातल बिर्सने कोसिस नगरौ। काँग्रेसलाई बिपीले तपाईहरूको जिम्मामा दिनु भयो तर तपाईहरूले संरक्षण गर्न सक्नु भएन। लोकतन्त्रमा गुट हुन्छ नै तर त्यो गुटको पनि परीधि त पक्कै होला नी किन एक आपसमा पानी बाराबार ? जसलाई जहाँ जे बोल्न मन लागेको छ त्यही बोलेको छ। मर्यादाको कदर छैन।
सभापति देउवाले केही दिन अघि गच्छेदारलाई उपसभापति बनाएका छन यसमा पनि बिबाद भने नआएको होईन तर गच्छदारलाई उपसभापति दिदा आपति हुने केही छैन बाटो बिराएकालाई स्थान दिएर मनाउनु ठीकै हो तर सभापतिले हरेक निर्णय गर्दा कार्य समितिमा छलफल भने पक्कै गर्नु पर्दछ।महामन्त्री शशांक एकदमै मौन हुनु हुन्छ। गगन थापा, धनराज गुरूङ्, बिश्व प्रकाश शर्मा, डा.चन्द्र भण्डारी, गुरू घिमिरे जस्ता यूवा नेताहरूले जमेर अगाडी बढ्न नसक्नु। डा.रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, सुजाता कोईराला, रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोईराला र प्रकाश मान सिंह भेटघाटमा ब्यस्त छन्। किन केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरूले देउवालाई लगाम लगाउन सक्दैनन् ? मलाई लाग्छ देउवाको एकल निर्णय मात्र संम्भब छैन होला।
यदी काँग्रेस र काँग्रेसीले काँग्रेसको साँख जोगाउने हो भने पहिला आफैबाट सुधारीएर अगाडी बढ्नु होस्।बर्षको ३६४ दिन काँग्रेस बन्ने र चुनावको दिन आफ्नै पार्टीका उमेदवारलाई हराउने खेल खेल्ने प्रथा जबसम्म काँग्रेस भित्र अन्त्य हुँदैन तबसम्म काँग्रेसको सुनौलो भबिष्यको परी कल्पना गर्न सकिदैन। रामचन्द्र पौडेललाई कसले हरायो ? बिश्व प्रकाश शर्मालाई कसले हरायो ? खोज्दै जाने हो भने यस्ता उदाहरण थुप्रै छन्। तसर्थ सबै भन्दा पहिला गुट नभइ आफूलाई काँग्रेसको अनुयायी हुँ भन्ने भावना सृजित गर्नु होस्। मेरो सन्दर्भमा भन्ने हो भने म काँग्रेसको सिपाही हुँ। मलाई गुटको ट्याग भिर्नु छैन यसो भनी रहदा देउवासंगको भेटमा खिचिएको तस्बिर सामाजिक संजाल फेसबुकमा हाल्दा मलाई देउवा गुटको भन्न पनि पछि परेनन् मित्रहरू खैर जे भए पनि म काँग्रेसको केवल एक सच्चा अनुयायी मात्र हुँ। म केवल काँग्रेसको चार तारे झण्डा र रूखलाई माया गर्छु र माया गरीरहने छु।
(लेखक अधिकारी जनसम्पर्क समिति मकाउका महामन्त्री हुन।)